araka ny fampitam-baovaon’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Richard Ravalomanana, teo amin’ny Toby Andrefan’Ambohijanahary. Fitaovam-piadiana nampalaza ny Rosianina izy ity, izay mandripaka hatramin’ny ala manakona ny dahalo sy ny omby afenina anaty kirihitra. Nanindry ity manamboninahitra ambonin’ny zandary ity, ny talata teo fa fitaovam-piadiana maro hafa ihany koa tahaka ny « drône » sy ny basy azo hitifirana hatrany amin’ny 800 metatra noho ny heriny sy ny fahitsiny mba hahafahan’ny zandary miaro tena manoloana ny dahalo no azo. Midika izany fa hihena ny isan’ny zandary maty am-perinasa izay mifanehitra amin’ny jiolahy.
Hahery vaika koa ny dahalo
Etsy an-daniny, matetika ireo mpitandro filaminana na manampahefana ambony ihany no mamatsy fitaovam-piadiana ny dahalo ka afaka mifanahantsahana hatrany izy ireo. Ho fiarovana io fampanofana na fivarotana basy mahery vaika amin’ny malaso io, dia hataon’ny zandary ezaka ny fandraisana anarana ireo zandary mampiasa izany sy ny fanaraha-maso ny toerana sy ny fotoana ampiasana ireo fitaovana vaovao natolotry ny fitondram-panjakana ireo. Nohamafisin’ny lehiben’ny zandary fa tsy ho afa-bela ireo mpitandro filaminana tratra tamin’ny basy voangona. Tena dahalo tokoa ve ireo namerina fitaovam-piadiana an-tsokosoko sa fanamboarana ny saim-bahoaka ireo basy marobe natao ati-pako tsy misy arakaraka, mialoha izao fetim-pirenena izao ?